Meaning of isikhundla omuhle kanye nesikhundla reverse Tarot "isondo fortune", umlingani imizwa?
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Meaning of isikhundla omuhle kanye nesikhundla reverse Tarot "isondo fortune", umlingani imizwa?
Inombolo "isondo fortune" ku "isiphetho isondo" 3500 yen ukuba baqaphele okushiwo
professional umbhuli kule sikhundla reverse uthole khulula asihlole indlela
okubhula ikhadi, wena ikhadi okuqondene Major Arcana, exhunywe ikhadi kuzoba 10. Maphakathi ikhadi, baye basondelana embuthanweni omkhulu, njesithombe ukudalelwa, lokhu iwuphawu isiphetho esimele aphikelele futhi PERIODICITY.
Leli khadi, okusho ukufa esikhulu ushintsho ezingeke edabula ukugwema wedwa. Ezinye ukuthi ukudalelwa futhi ushintsho emgwaqweni, okuyinto bekulindeleke ekuvakasheni kwakho siqu, ngezinye izikhathi kwenzeke ukuthi awuzange nhlobo okuhloswe ukuba kulindeleke kungaba nzima kakhulu. Njengoba
ibonakalisa siqu kwakhe okusondelayo ukugeleza isiphetho esikhulu ingenze lutho kuyinto, kungenzeka ukuthi kubalulekile ukulungela kwengqondo ukwamukela isiphetho.
Uma amasondo imizwa
isiphetho umuntu isikhundla omuhle uzakuthathwa ukuthi kusho ukuthini ukuthi "Wheel of Fortune" kwaba isikhundla omuhle, ukhanda iwukuba abonisa ukuthi ihamba ohlangothini kungaba egculisayo ngawe wena. Uyoba ngezinye izikhathi kuholela imiphumela elindelekile ukuthi kwaba enye inhlangano futhi empeleni kokubili imizwa uthando unrequited, kungase kube Ukuvuma izono ngokukhululeka nangokusuka kusukela kolunye uhlangothi ubengazi nabangani kuphela kuze kube yileso sikhathi.
ngokuya ushintsho omuhle kimi, kuba okuhlangenwe nakho okuhle kungalindeleka Cishe. Ubani ukunginakekela akusho ukuthi kimi uyazi ngokwami, ikusasa ngoba hhayi ebhekene plus mina, kuwumqondo omuhle ukuba abe nesibindi ukubuza imizwa enye inhlangano. Ngisho noma nganoma yisiphi ukuthunyelwa, futhi ekugcineni le isiphetho ukuthi bangaba bajabule.
uma isondo fortune isikhundla omuhle, kubalulekile ukuphathisa yokuzihlanganisa ukugeleza ukudalelwa. Ungakwazi get welula isandla Uma ucabanga ithuba, nsuku zonke umuzwa ezolile kuze bakholwe engcupheni umlingani Ake ukuchitha. Njengoba unkulunkulukazi isiphetho ngokuqinisekile kimi smiling kuwe.
icala isondo imizwa
isiphetho umuntu ahoxise isikhundla uzakuthathwa ukuthi kusho ukuthini ukuthi "isondo fortune" iyona isikhundla reverse, endaweni kwadalwa ukuthi ayikwazi ukushintshwa, hhayi abami lokugcina kungenzeka ukuthi umphumela ngeke bowuqonde okusezingeni eliphezulu. Noma ukuthenga wakhe kwenye inhlangano ukuba ngokuthi, noma abawenzayo kakade, kungase kube yokuthi mhlawumbe umuntu oshadile.
Ngaphezu kwalokho, noma ibanga nakakhulu iba kude ngokudlula noma enkingeni nezinye party, kungase kuphumele ukudluliswa ezikude maqondana lo msebenzi.
uma abasondela akuyona ukugeleza nejabulisayo is, uzobe agelezela isiqondiso ezingasho ngingajabule futhi bazinikele ukugeleza. Phuma kusukela ukugeleza ngokushesha ngangokunokwenzeka, by kabusha sokushona injongo, uzokwazi kabusha phetho eyabo.